musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » El Al anotangazve Budapest kuenda kuTel Aviv ndege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hungary Kuputsa Nhau • Israel Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Ichizarura zvakare kubatana kwayo pakati peBudapest neTel Aviv nhasi, El Al ichaita kanokwana kana pavhiki sevhisi pane 2,165km chikamu.
El Al anodzokera kuBudapest Airport.
Israeli mureza anotakura anotangazve Tel Aviv masevhisi kubva kuBudapest.
Ndege dzeBudapest-Tel Aviv dzichashanda kanomwe pasvondo.
Budapest Airport's nzira network network inotangazve inoenderera nekudzoka kweye Hungarian gateway's airline mudiwa, El Al Airlines.
Kuvhura patsva hukama kuTel Aviv, mutakuri mureza weIsrael achawedzera zvakanyanya mashandiro enhandare kuenda kuMiddle East nyika.
Ichizarura zvakare kubatana kwayo pakati peBudapest neguta riri pamhenderekedzo yeMediterranean nhasi, anotakura achashanda kanokwana kana pavhiki sevhisi pane 2,165km chikamu.
Balázs Bogáts, Musoro weKuvandudza Ndege, Budapest Airport akati: “Tinofara zvikuru kuona El Al dzoka - Budapest ndiyo imwe yenzvimbo dzepamusoro dzevafambi veIsrael, saka tinoziva kuti sevhisi iyi ichave iri kudiwa kukuru. Budapest ine nharaunda yakakura yechiJuda uye, zvirokwazvo, Iyo Great Synagogue yeBudapest ndiyo yechipiri pakukura sinagogi munyika. "Saka, tine chivimbo chekuti El Al inotangazve mabasa kubva kuTel Aviv ichave inozivikanwa nevashanyi pamwe nevashanyi vari kushanyira shamwari nehama."
El Al Israel Airlines Ltd. ndiye anotakura mureza weIsrael. Kubva kumhanya kwayo kwekutanga kubva kuGeneva kuenda ku Tel Aviv munaGunyana 1948, ndege yendege yakura kuti ishumire nzvimbo dzinopfuura makumi mashanu, ichishanda zvakarongwa mabasa epamba uye epasi rose uye nendege dzinotakura zvinhu mukati meIsrael, uye kuEurope, Middle East, America, Africa, uye Far East, kubva kunzvimbo yayo huru muBen. Gurion Airport.